ekhaya / Bible / ezincwadini / Paul's Letter to the Ephesians
1:1 Paul, umpostile kaYesu Kristu, obizwe ngokuthanda kukaThixo, kubo bonke abo bangcwele e-Efese, abakholwayo kuKristu Yesu.
1:2 Makube lubabalo kuni, noxolo oluvela kuThixo uYise, neNkosi yethu uYesu Kristu.
1:3 Makabongwe uThixo, uYise weNkosi yethu uYesu Kristu, lowo wasisikelelayo ngeentsikelelo zonke zoMoya emazulwini, kuKristu,
1:4 kanye njengoko wasinyula ngoKrestu kwangaphambi kokusekwa kwehlabathi, ukuze sibe ngcwele kunye ngomumo emehlweni akhe, ngothando.
1:5 Uye kwangaphambili ukuba senziwe oonyana, ngaye u-Yesu Kristu, ngokwakhe, ngokwenjongo intando yakhe,
1:6 ukuze kudunyiswe uzuko lobabalo lwakhe, one onesiphiwo nathi ngoNyana wakhe oyintanda.
1:7 kuye, esinayo sikuye inkululeko ngokuhlawulelwa ngegazi lakhe: Ngoxolelo lwezono ngokuvumelana ngokobutyebi bobabalo lwakhe,
1:8 leyo superabundant kuthi, nabo bonke ubulumko nokuqonda.
1:9 Ngoko ngaba ukubazisa bona imfihlelo yokuthanda kwakhe, leyo ubeke kuKristu, ngendlela kakuhle kuye,
1:10 kwi ukugosisa lakuzaliseka ixesha, ukuze bahlaziye kuKristu yonke into ikhona ngaye ezulwini nasemhlabeni.
1:11 kuye, Nathi babizwa ukuba isabelo sethu, simisiwe ngenxa engaphambili ngokuvumelana icebo Lowo azalisa zonke izinto ngalo nto ngokwecebo lokuthanda kwakhe.
1:12 Ngoko ngamana, ukuba kudunyiswe uzuko lwakhe, thina singabathembele kwangaphambili kuKristu.
1:13 kuye, nawe ngokunjalo, emva enaluvayo, bakholwa iLizwi lenyaniso, leyo iVangeli yosindiso lwakho, natywinwa naqiniselwa ngaye uMoya oyiNgcwele Lesithembiso.
1:14 Nguye lo isibambiso selifa lethu, ke ukufunyanwa yentlawulelo, ukuba kudunyiswe uzuko lwakhe.
1:15 Ngenxa yale nto, kunye ezindabeni zokholo lwakho leyo kuyo iNkosi uYesu, yaye uthando lwakho kubo bonke abangcwele,
1:16 I singayekanga ukumbulela uThixo ngenxa yenu, embiza ukuba akhumbule emithandazweni yam,
1:17 ukuze uThixo weNkosi yethu uYesu Kristu, uYise wozuko, aninike umoya wobulumko nowesityhilelo kuwe, ulwazi ngaye.
1:18 Ngamana azinakukhanyiswa amehlo intliziyo yakho, ukuze nilazi into eliyiyo ithemba lobizo lwakhe, yaye ubutyebi bobuqaqawuli belifa lakhe phakathi kwabo abangcwele,
1:19 kwaye ubukhulu nobaluleke esidimeni sakhe kuthi, sengqondo thina bakholwayo ku pfumelelana umsebenzi esidimeni sakhe ezinamandla,
1:20 awayenzayo kuKristu, ngokuyivusa kwabafileyo nokuseka nayo esandleni sakhe sokunene emazulwini,
1:21 ngaphezu bonke ubulawuli negunya nesidima nobukhosi, kwaye ngaphezu lonke igama awandibabala, kungekhona kweli phakade, kodwa kule yobudala elizayo.
1:22 Kwaye yena uye wazithobela phantsi kweenyawo zakhe zonke izinto, yaye uye wamenza yintloko phezu lonke iBandla,
1:23 lona lingumzimba wakhe, nto leyo ke liphuphuma bubukho bakhe lowo kufeza yonke into wonke.
2:1 Kwaye nina naye nifudula nifile ezonweni zenu kunye namacala,
2:2 apho nihamba kumaxesha elidlulileyo, ngokutsho kwiminyaka eli hlabathi, ngokutsho kumthetheli kwamandla eli isibhakabhaka, umoya ngoku osebenza koonyana yokungathembani.
2:3 Kwaye nathi sonke nabasaziyo ezi zinto, ezidlule, yi kwiminqweno yenyama yethu, ngokupheleleyo kusini na ukuthanda kwenyama yaye ngokutsho iingcinga zethu. Kwaye ngoko thina, ngokwemvelo, oonyana yengqumbo, enjengamakhiwane abanye.
2:4 kodwa kunjalo, uThixo, esisityebi nje ngenceba, ngenxa yokuba uthando lwakhe olukhulu obukhulu awasithanda ngalo,
2:5 thina sifile nje ziziphoso zethu, iye enlivened ndawonye noKristu, nisindiswe ngokubabalwa sakhe uye usindiswe.
2:6 Kwaye yena uye wasivusa naye, yaye kuye kwabangela ukuba sihlale phantsi kunye emazulwini, kuKristu Yesu,
2:7 ukuze abonise, emaphakadeni kungekudala ukuba sifike, ubutyebi ukuphuphuma kobabalo lwakhe, ngokulunga kwakhe, ngokusenzela ububele ngoKristu Yesu.
2:8 Kuba nisindiswe ngokubabalwa, niye nasindiswa ngokholo. Kwaye oku kwenu, ngokuba isipho sikaThixo.
2:9 Kwaye oku ngemisebenzi, ukuze kungabikho namnye ndiqhayise.
2:10 Kuba thina wezandla zakhe, sidalelwe kuKristu Yesu, ukuze senze imisebenzi elungileyo uThixo awazilungisela kwaye apho thina sihambe.
2:11 Ngenxa yale nto, sikhumbule ukuba, ezidlule, ube nifudule niziintlanga ngokwenyama, ukuba nabizelwa kwabangalukileyo kwabo babiziweyo ukwaluswa enyameni, into yenziwe yi ndoda,
2:12 nokuba wena, ngelo xesha, ngaphandle uKristu, ukuba bezingaqhelekanga kwindlela yobomi wakwaSirayeli, ukuba iindwendwe umnqophiso, ningenathemba lesithembiso, yaye ngaphandle uThixo kweli hlabathi.
2:13 Kodwa ngoku, kuKristu Yesu, wena, ababe engaphambili kude, ziye kufuphi ngalo igazi likaKristu.
2:14 Kuba nguye oluxolo lwethu. Wenza ezibini zibe kwenye, yi ezinyibilikayo udonga oluphakathi yokuzahlula, eliphikisayo, yinyama yakhe,
2:15 lokusula umthetho nemiyalelo ngomthetho, ukuze bajoyine ezi zimbini, ngokwakhe, zibe ngumntu omnye omtsha, ngokwenza uxolo
2:16 kwaye elixolelanisa babini,, mzimba mnye, ngawo umnqamlezo, ukutshabalalisa le eliphikisayo ngokwakhe.
2:17 Naphezu befika, ke ivangeli ezilungileyo zoxolo kuni abo bakude, kude, noxolo kwabo abakufuphi.
2:18 Ngokuba zadalelwa kuye, thina sobabini,, kwangaloo Moya, ukuba uYise.
2:19 ngoku, ke, wena iindwendwe akusekho kanye kufika. kunokuba, ukuba abemi phakathi abangcwele kwi indlu kaThixo,
2:20 akuba nakhelwe phezu kwelitye lesiseko sabapostile abaProfeti, kunye noYesu Kristu ngokwakhe ilitye lembombo obalaseleyo.
2:21 kuye, konke oko kuye kwakhiwa ihlanganiswe kunye, esukuma ibe yitempile engcwele eNkosini.
2:22 kuye, nani nakhelwe ndawonye kuye, ukuze nibe yindawo yokuhlala kaThixo ngaye uMoya.
3:1 Ngenxa yale lubabalo, I, Paul, Mna ndikwangumbanjwa kaYesu Kristu, ngenxa yenu zintlanga.
3:2 ngoku, nikuvile ukugosisa kobabalo lukaThixo, leyo elinikwe kum phakathi kwenu:
3:3 ukuba, ngokusebenzisa ngokwesityhilelo, mfihlakalo undazisile, kanye njengoko kubhaliwe ngasentla kumagama ambalwa.
3:4 kodwa, ngokufunda le ngokusondeleyo, ukuze ukwazi ukuqonda ingqondo yam imfihlelo kaKristu.
3:5 Kwezinye izizukulwana, oku ke ndingaziwa oonyana babantu, njengoko bayityhilelweyo ngoku abapostile bakhe abangcwele, nabaprofeti bakhe, ngaye uMoya,
3:6 ukuze iintlanga zaziya co-ziindlalifa, zikwamzimba mnye, namaqabane ndawonye, ngedinga lakhe, sikuye nje uKristu Yesu, ngenxa yeVangeli.
3:7 Of le Vangeli, Ndiye waba ngumlungiseleli, ngokutsho ngokwesipho sobabalo lukaThixo, nezo nazamkelayo kum esebenzisa ukusebenza esidimeni sakhe.
3:8 Nangona mna ndingoyena mncinanana kubo bonke abangcwele, Ndiye ndababalwa ngolo lubabalo: ukuba ashumayele phakathi kweentlanga iindaba ezilungileyo zobutyebi obungalandekiyo bukaKristu,
3:9 khanyisa wonke ngokuphathelele ukugosisa mfihlelo, ifihliwe kwangaphambi kwawo amaphakade, uThixo owadala zonke izinto,
3:10 ukuze ubulumko bukaThixo, obuziintlobo ezininzi zibe kakuhle ezaziwayo oozilawuli noomagunya, emazulwini, ngokusebenzisa Church,
3:11 ngokoko njongo engaphelelwa, leyo kuye kwasekwa kuKristu Yesu, iNkosi yethu.
3:12 Kuye sithemba, ngoko siya ngokuzithemba, ngokholo lwakhe.
3:13 Ngenxa yale nto, Ndiyanicela ukuba buthathaka ngeembandezelo zam egameni lakho; kuba oko ziluzuko lwenu.
3:14 Ngenxa yale lubabalo, Ndiguqa amadolo am kuye uYise weNkosi yethu uYesu Kristu,
3:15 evela kuye konke lukatata ezulwini kunye nasemhlabeni kuthatha igama layo.
3:16 Kwaye ucele ukuba mayimnike ukuba komelela ngaye uMoya wakhe, isidima, ngokuvumelana ubutyebi bozuko lwakhe, ngokusingisele emntwini ongaphakathi,
3:17 ukuze ukuba uKristu ahlale ezintliziyweni zenu ngalo ukholo isekelwe, futhi esekelwe, sa.
3:18 Ngoko ngamana kuba nako wamwola, nabo bonke abangcwele, into obuyiyo ububanzi, nobude, nobunzulu,
3:19 of uthando lukaKristu, kwaye bakwazi ukuba kuko konke ukwazi, ukuze ndizaliswe konke ukuzala kukaThixo.
3:20 Ke kaloku, kuye onako ukwenza zonke izinto, ndabagqitha esinokuyibuza okanye ukuqonda, esebenzisa isidima okusebenzayo kuthi:
3:21 kuye malubekho uzuko, eCaweni kwaye kuKristu Yesu, kwizizukulwana ngezizukulwana zonke, ngonaphakade ngonaphakade. Amen.
4:1 Kwaye, njengokuba mna mbanjwa waseNkosini, Ndiyanibongoza ukuba nihambe ngokulufaneleyo ubizo kuwe enabizwa ngalo:
4:2 konke ukuthobeka kwentliziyo nobulali, ngomonde, ukuxhasana ngothando.
4:3 Yiba nexhala ukulondoloza ubunye boMoya kwiqhina zoxolo.
4:4 umzimba mnye noMoya: kule enabizwa ngalo ithemba omnye lobizo lwenu:
4:5 enye iNkosi, omnye ukholo, lunye ubhaptizo,
4:6 Mnye uThixo, uYise wabo bonke, ophezu kwabo bonke, okubo bonke, kunye nathi sonke.
4:7 Kodwa ngamnye kuthi akukho unikwe ubabalo ngokomlinganiso elabelwe nguKristu.
4:8 Ngenxa yale nto, uthi: "Wenyuka phezulu, wathabatha ekuthinjweni kwababathimbileyo; wabanika izipho abantu. "
4:9 Ke kaloku, ukuba uye wenyukela, into eseleyo ngaphandle kuba kuye wehlela, kuqala, waya kwezona ziseza ntsi iindawo zomhlaba?
4:10 Lowo owehla nguye efanayo lowo wenyuka ngaphezu kwamazulu onke, ukuze kuzaliseke konke.
4:11 Kwaye enye kalula ukuba abathile babeza kuba Apostles, kanti ezinye nabaprofethi, kodwa abavangeli ngokwenene abanye, kunye nabanye abefundisi kunye nootitshala,
4:12 ngenxa ekupheleleni abangcwele, yi umsebenzi ubulungiseleli, kwi lakheke umzimba kaKristu,
4:13 side thina sonke esidibana ubunye bokholo nobokumazi okuzeleyo uNyana kaThixo, njengendoda efezekileyo, kwi emlinganisweni ubudala bokuzala kukaKristu.
4:14 Ngoko ngamana ke singabi saba abantwana, waphazamiseka yaye siphetshethwa ngumoya wonke wemfundiso, ngenxa yobubi babantu, yaye ngobuqhetseba leyo ekhohlisayo ke isiphoso.
4:15 kunokuba, wayesenza siwa ngokwenyaniso ngothando, sifanele nande yonke, kuye lowo uyintloko, UKristu yena.
4:16 Ngokuba kuye, umzimba uphela lahlangana ndawonye, yi zonke joint bha, ngokusebenzisa umsebenzi amaqashiso ilungu ngalinye, ukuzisa ukuphuculwa umzimba, ngayo ukwakhiwa kwayo ngalo uthando.
4:17 Kwaye, Nditsho lo, kwaye ndikungqine ndiseNkosini: ukuba nihambe ukususela ngoku, kungekhona iintlanga, ngamampunge engqiqo yazo,
4:18 ukuba ingqondo yabo lisithe, zingazani nobomi bukaThixo, ngenxa yokungazi phakathi kwabo, ngenxa yokuqaqadeka kweentliziyo zabo.
4:19 Efana nale, lithemba, baye bazinikela ukuze okubi ngokwesini, wenza konke ukungcola ne rapacity.
4:20 Kodwa ayikho into oyifundileyo kuKristu.
4:21 ngokuba, inene,, uphulaphule kuye, yaye bayalelwa kuye, njengoko inyaniso ikuye uYesu:
4:22 ukubekela bucala ukuziphatha kwakho ngaphambili, le ndoda yangaphambili, ngubani wonakele, ngokusebenzisa inkanuko, kuyo impazamo,
4:23 kwaye ngokunjalo nihlaziywe ke kuwo umoya wengqiqo yenu,
4:24 kwaye njalo nimambathe umntu omtsha, ngubani, ngokuvumelana kuThixo, wadalelwa ubulungisa kunye nasebungcweleni benyaniso.
4:25 Ngenxa yale nto, ukubekela bucala elele, ndithetha inyaniso, elowo nommelwane wakhe. Kuba thina sonke ziyinxalenye omnye komnye.
4:26 "Yiba nomsindo, kodwa musa bakulungele isono. "Musa ukuvumela ilanga phezu umsindo wakho.
4:27 Nika akukho indawo uMtyholi.
4:28 Whoever umohluthile, makehle ngoku ungebi, kanye ke makabulaleke, esebenza okulungileyo ngezandla zakhe, ukwenza okuhle, ukuze abe nento yokwabela abo kwanokuswela.
4:29 Makungabikho amagama zingendawo ziphuma emlonyeni wakho, kodwa kuphela okuhle, ukuze lakheke ukholo, ukuze pha phezu kwabo bamphulaphulayo.
4:30 Kanjalo musani ukuba ukulungele ukuba buhlungu uMoya oyiNgcwele kaThixo, enathi kuye natywinwa, ibagcinele imini yentlawulelo.
4:31 Mabukhweleliswe kuni bonke ubukrakra, nomsindo nengqumbo nokukhala nokunyelisa kususwa kude kuwe, ndawonye nolunya lonke.
4:32 Ke nina yibani nobubele nenceba omnye komnye, nixolelana, kanye njengokuba uThixo wanixolelayo ekuKristu.
5:1 ngoko ke, njengoko uninzi oonyana abathandekayo, yibani ngabaxelisa uThixo.
5:2 Nihambe eluthandweni, nathi kwanjengokuba naye uKristu wasithandayo wazinikela ngenxa yethu, ube ngumnikelo wokudla kunye nedini kuye uThixo,, nge silivumba elimnandi.
5:3 Kodwa makangaphindi naluphi na uhlobo kuwo umbulo, okanye ukungcola, okanye rapacity kangangokuba njengoko kukhankanywe phakathi kwenu, kanye njengokuba ufanelwe abangcwele,
5:4 lingaphumi nelinye, okanye sizizidenge, okanye intetho etshabhisayo, ngokuba oku ngaphandle kwenjongo; kodwa kunokuba, ubonga.
5:5 Ukuze bazi yaye baqonde le: akukho namnye ongumhenyuzi, okanye amkhanuke, okanye abaphangi (kuba aba bayiyo i uhlobo lwenkonzo kwizithixo) ubamba akanalifa ebukumkanini bukaKristu noThixo.
5:6 Makungabikho bani unilukuhlayo ngamazwi alambathayo. Kuba iza ngenxa yezo zinto, ingqumbo kaThixo wathunyelwa phezu koonyana yokungakholwa.
5:7 ngoko ke, musa ukukhetha ukuba nxaxheba nabo.
5:8 Ngokuba ubumnyama baba, ezidlule, ke ngoku nikukukhanya, eNkosini. Ngoko ke, hambani ke oonyana bokukhanya.
5:9 Kuba sona isiqhamo soMoya sikuko konke ukulunga, nobulungisa, nenyaniso,
5:10 ngenene oko kukholekile uThixo.
5:11 Kwaye, musani ukuba nabudlelane ngemisebenzi yobumnyama engenasiqhamo, kodwa kunokuba, ukuphikisa kwabo.
5:12 Kuba izinto ezenziwa ngabo emfihlekweni zibe lihlazo, ukuba ukubalula.
5:13 Ke zonke ezi zinto, ichaswa, ziyabonakalaliswa kukukhanya. Kuba konke okubonakalaliswayo kukukhanya.
5:14 Ngenxa yale nto, oko kuthiwa: "Wena abalele: ukuphaphamisa, aze avuke kwabafileyo, kwaye ngokunjalo uKristu baya khanyisa you. "
5:15 Kwaye, bazalwane, ukubona ukuba uhamba ngokucophelela, akafani ke eziziziyatha,
5:16 kodwa isilumko: ukuhlawulela le yobudala, ngokuba eli lixesha elibi.
5:17 Ngesi sizathu, musa ukukhetha ukuba imprudent. kunokuba, ukuqonda into okuyiyo ukuthanda kukaThixo.
5:18 Kwaye musa ukukhetha ukuba benxilile yiwayini, kuba oko self-zibhuqe. kunokuba, uya kuzaliswa nguMoya oyiNgcwele,
5:19 ethetha phakathi omnye nomnye ngeendumiso, neengoma, canticles ngokomoya, ukucula kunye becengceleza uhadi kuYehova ezintliziyweni zenu,
5:20 nimana nibulela ngenxa yeento zonke, egameni leNkosi yethu uYesu Kristu, kuye uThixo uYise.
5:21 Yiba kuxhomekeke omnye nilulamelana ngokoyika uKristu.
5:22 Abafazi kufuneka bawathobele awabo, njengoko iNkosi.
5:23 Ngokuba indoda le iyintloko yomfazi,, njengokuba naye uKristu eyintloko yebandla. Waye yena ngokwakhe enguMsindisi yomzimba wakhe.
5:24 ngoko ke, kanye njengokuba ibandla eli limlulamela uKristu, ngokunjalo kufuneka bawathobele awabo amadoda ezintweni zonke abafazi.
5:25 amadoda, ukuthanda abafazi benu, kanye njengokuba naye uKristu walithandayo ibandla, wazinikela ngenxa yalo,
5:26 ukuze abangcwalise kuye, ukuhlamba ehlambulukileyo wakhe ngamanzi okwelizwi labo ubomi,
5:27 ukuze anikele ukuba yena abe Church ezukileyo, ungenandawo ndawo okanye mibimbi okanye nayiphi na into enjalo, kangangokuba wayeza kuba ngcwele kanye ngomumo.
5:28 ke, kakhulu, Amadoda kufuneka bathande abafazi babo, njengokuba imizimba yawo. Lowo umthandayo umfazi wakhe uyazithanda.
5:29 Kuba akukho namnye wakha wayithiya eyakhe inyama, kodwa endaweni yoko ke uyayondla aze ayiphathe ngononophelo, njengoko noKristu esenjenjalo kulo ibandla.
5:30 Kuba thina aba yinxalenye yomzimba wakhe, inyama bakhe amathambo akhe.
5:31 "Ngesi sizathu, umntu uyakushiya ngasemva uyise nonina, kwaye uya ninamathele emfazini wakhe; baze abo babini babe nyama-nye. "
5:32 Oku a yomthendeleko enkulu. Kwaye mna ndithetha kuKristu kunye eBandleni.
5:33 kodwa ngokwenene, ngamnye kuni ufanele amthande umkakhe, njengoko azithanda. Kwaye umfazi ufanele umoyike umyeni wakhe.
6:1 abantwana, bathobeleni abazali benu nimanywe neNkosi, kuba oko kububulungisa.
6:2 Beka uyihlo nonyoko. Lo ngumyalelo wokuqala onesithembiso:
6:3 ukuze kulunge kuwe, kwaye ukuze ube nexesha elide emhlabeni.
6:4 Kwaye wena, oyise, musani ukubacaphukisa abantwana benu, kodwa ubafundise kunye ingqeqesho kunye nokulungiswa kweNkosi.
6:5 abakhonzi, balalele nakwizikhulu zenu ngokwenyama, ngoloyiko nokungcangcazela, ningenakumbi ezintliziyweni zenu, ukuba uKristu.
6:6 Musa ukukhonza kuphela xa wabona, ngokungathi ukukholisa abantu, kodwa enze athi singabakhonzi bakaKristu,, ukwenza ukuthanda kukaThixo entliziyweni.
6:7 Mkhonzeni ikholekayo, njengoko iNkosi, kungekubo abantu.
6:8 Kuba niyazi ukuba into esukuba ilungile, athe ulowo wayenza, lowo uya kwamkeliswa kwayona yiNkosi, nokuba uNonzi nokuba free.
6:9 Kwaye wena, yamakhosi, yenzani kwaezo zinto kubo, nikuyeke ukusongela, nisazi nje ukuba uNdikhoyo nina nobabini nabo usezulwini. Ngokuba akukho bethanda nabani.
6:10 Nangawo amasalela, bazalwane, ukomelezwa eNkosini, ngamandla esidimeni sakhe.
6:11 Xhobani sonke isikrweqe sikaThixo, ukuze nibe nako ukumisa nibuchase ubuqhinga boMtyholi.
6:12 Ngokuba umzamo wethu asingowokuzamana negazi nenyama, ngowokuzamana nazo izilawuli, nawo amagunya, nazo iziphatha-hlabathi zobumnyama balo, nayo imikhosi yomoya abakhohlakeleyo kwezasezulwini iindawo eziphakamileyo.
6:13 Ngenxa yale nto, uthabathe isikrweqe sikaThixo, ukuze nibe nako ukuchasa ngomhla ombi, nithi nikufezile konke.
6:14 ngoko ke, ukuma siqinile, ekubeni nibhinqe inyaniso esinqeni senu inyaniso, ke ukuba kuthe kwambatha isigcina-sifuba sobulungisa,
6:15 nokuba ezinyaweni zenu ulungiselelo lweendaba ezilungileyo zoxolo.
6:16 Ezintweni zonke, uthabathe ikhaka lokholo, ngawo nibe nako ukucima zonke iintolo ezinomlilo zakhe ezimbi.
6:17 Yamkelani isigcina-ntloko sosindiso, nalo ikrele loMoya (leyo liLizwi likaThixo).
6:18 Ngenxa zonke uhlobo ukuthandaza nokukhunga, nithandaza amaxesha onke nikuye uMoya, niyiphaphamele loo nto ngako konke ukuzingisa nokukhunga, ngenxa yabo bonke abangcwele,
6:19 nangenxa yam, ukuze amagama ukuze anikwe kum, ekuwuvuleni umlomo wam, ndize ndazise ngokungafihlisiyo imfihlelo yeendaba ezi zilungileyo,
6:20 ngendlela yokuba ukuze ndingafihlisi ukuthetha kuzo, njengoko ndimelwe kukuthetha ngako. Kuba mna asebenze endisisigidimi esisezintanjeni ngenxa yeVangeli.
6:21 ngoku, ukuze nani nikwazi ngezinto zokuswela kum, nento endiya kuyenza, nguTikiko, umzalwana oyintanda, umlungiseleli othembekileyo ngokwaseNkosini, uya kukwazisa zonke kuwe.
6:22 Ndabathumela kuni ngenxa yesi sizathu, ukuze nazi izinto ezisixhalabisayo, ukuze nokuze azithuthuzele iintliziyo zenu.
6:23 Makube luxolo kubo abazalwana, nothando, ndawonye nokholo, oluvela kuThixo uYise, neNkosi yethu uYesu Kristu.
6:24 Ubabalo malube nabo bonke abayithandayo iNkosi yethu uYesu Kristu, ngokungenakonakala. Amen.